Jawaari oo iska iscasilay afhayeenka baarlamaanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJawaari oo iska iscasilay afhayeenka baarlamaanka
Jawaari oo iska iscasilay afhayeenka baarlamaanka
April 9, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Maxamed Shiikh Cumaan Jawaari. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Afhayeenkii baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shiikh Cusmaan Jawaari ayaa iscasilay maanta oo Isniin ah, ku xigeenka afhayeenka Cabdiweli Ibraahim Muudey ayaa xildhibaanada u sheegay.
Xildhibaanada ayay u qorsheysneyd in ay kulan ku yeeshaan Muqdisho Isniinta si ay ugu codeeyaan mooshinka ka dhanka ah afhayeenka.
Maalmihii lasoo dhaafay khilaaf xoogan ayaa ka dhexjiray baarlamaanka iyo xukuumadda kadib markii qaar katirsan golaha baarlamaanka oo u badan wasiiro ay keeneen mooshin lagu ceyrinayo Jawaari.
Khilaafka oo muddo bil ka badan jiray, ayaa dib u dhac ku keenay howlihii shaqo ee dowladda federaalka Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Muqdisho.
Jawaari oo 72-sanno jir ah ayaa xafiiska joogay tan iyo sanadkii 2012-kii.
Si kastoo ay ahaataba, iscasilaadiisa ayaa la filayaa in ay soo afjarto ismariwaaga siyaasadeed ee ka dhexjiray dowladda.
April 20, 2018 Janaraal Moorgan oo si diiran loogu soo dhaweeyay Garoowe
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa duqeyn uu ku bartilmaameedsanayo maleeshiyada Al-Shabaab ka fuliyay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose Isniintii, waxaana lagu dilay afar dagaalyahan, sida Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ku sheegeen war-saxaafadeed. Duqeyntii shalay [...]